Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. सेती अञ्चल अस्पतालमा चिकित्सक नहुँदा सेवाग्राही मारमा – Emountain TV
सेती अञ्चल अस्पतालमा चिकित्सक नहुँदा सेवाग्राही मारमा
कैलाली, २४ साउन । सेती अञ्चल अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार चिकित्सक नहुँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन् । विरामीको चाप हुने अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक नहुदा सेवा प्रभावकारी भएको छैन।अर्कोतर्फ शैयाको अभावमा बिरामीलाई बेन्चमा राखेर उपचार गर्ने गरिएको छ ।
कैलालीको धनगढीमा रहेको सेती अञ्चल अस्पतालमा २३ जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी छ । तर १२ जना चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त छ । ६ जना मेडिकल अफिसर पनि दरबन्दीमा छैनन् । ११ औं तहका वरिष्ठ फिजिसियनदेखि बालरोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ गाइनोक्लोजिस्ट, वरिष्ठ प्याथोलोजिस्ट, इएनटी, मानसिक रोग विशेषज्ञ, मुटुरोग विशेषज्ञ र डेन्टल सर्जन रिक्त छ ।
नवौंं र १० औं तहका १२ जना चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त रहेको अस्पताल जनाएको छ । दक्ष चिकित्सक नहुँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन् । अत्याधिक बिरामीको चाप हुने भएकाल अस्पातलले दरबन्दी अुनासरको चिकित्सक परिपूर्ति गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
सेति अञ्चल अस्पतालमा १ सय २५ शैयाको भएपनि अहिले २ सय ५० शैया राखिएको छ । शैयाको अभाले बिरामीलाई बेन्चमै राखेर उपचार गर्ने गरिएको छ । व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत आएसँगै अस्पतालमा झन् अन्योल थपिएको छ ।
बिहिबार, २४ साउन २०७५
सिके राउतको ११ बुँदे सम्झौता विरोधमा सर्लाही विद्यार्थीहरुको सिटी जुलुस
वीरगन्जमा चेतनामुलक होली र्‍याली प्रदर्शन
हेम्जा सडक खण्डमा प्रदेश सांसदको अनुगमन
उचित पारिश्रमिक र पेशागत सम्मानको अभावमा कालिगढ पेशा संकटमा
जनप्रतिनिधिको अवैध धन्दा, वन मासेर ढुंगाखानी